Wasiirka arrimaha gudaha: Waxaan aamminsannahay inaan wada hadli karno Soomaaliland – Radio Muqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka go’an tahay xukuumadda in la sii wado wadahadallada ay kula jirto Soomaaliland si heshiis looga gaaro tabashada jirta.
Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen “Odowaa” oo ka qeyb galayay barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa Radiyo Muqdisho ayuu sheegay in xalku uu ku jiro in la wada hadlo. “Wada hadalku mar walba waa jidka kaliya ee u furan umadda Soomaaliyeed….. Waxaan aamminsannahay inaad wada hadli karno, hal Soomaaliya ayaa jirta laakin waan kala aragti duwannahay”
Wasiirku wuxuu intaa ku daray in dowladda Soomaaliya ay aamminsan tahay in la wada hadli karo, sidaas adarteedna aan loo baahnayn in cid kale ay dhexdhexaadiso dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland.
“Inaan wada hadalno ayaanba diyaar u nahaye dadka kale maxaa looga baahan yahay? Su’aashaas waxay u baahan tahay jawaab. Wadahadalka marka aad diiddo ayaa waxaa la yiraahdaa qofka gogosha halla soo galiyo…… aan wada hadalno, waan ku heshiin karnaa waxa naga dhaxeeyo” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa ku kala tagay wada hadalkii ugu dambeeyay ee ku dhex maray Istnbuul bishoo Feberaayo, kaddib markii ay Soomaaliland ku doodday in wafdiga dowladda Soomaaliya laga saaro xubno ka soo jeeda gobollada woqooyi, dowladda Soomaaliya dooddaas waxay ku tilmaantay mid aan la aqbali karin.